I-condo emangalisa endaweni ekhethekile yaseLa Grande - I-Airbnb
I-condo emangalisa endaweni ekhethekile yaseLa Grande
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Anthony
I-condominium entsha endaweni okukhethekile yase-La Grande Residence etholakalayo manje. Iba ngowokuqala ukujabulela lesi sakhiwo se-boutique esinamachibi okubhukuda amabili, indawo yokudlela eseduze, futhi eduze kwakho konke okukhangayo.
Le ndawo ifakwe ngokuphelele ifenisha evela kwamanye amazwe futhi ifakwe ilineni, izitsha, izinto zokusika kanye nengilazi. Imishini yekhwalithi ephezulu iqinisekisa ukuthi ukuhlala kwakho kuzoba lula.
I-inthanethi eshesha kakhulu ihlinzekwe esakhiweni evumela izivakashi ukuthi zisebenzise ithuba elihle kakhulu loxhumano lwedatha, kanye namashaneli angu-40 e-TV ekhokhelwayo efuneka kakhulu ku-Samsung TV yesikrini esikhulu.
Uma ujabulise isivakashi ungacela indawo yokudlela yezivakashi ukuthi ikulungisele ukudla futhi ikulethe ekamelweni lakho ukuze sikunikeze. Nethezeka ngemva kwalokho kusofa onethezekile ngokubuka ichibi, bese ulala embhedeni othokomele kakhulu wasentshonalanga.
4.83 · 42 okushiwo abanye
IMalabanias ingenye yezindawo ezihlala abantu abaningi e-Angeles City, ephakathi komgwaqo omkhulu we-MacArthur kanye noBungane. Inxanxathela ithunyelwa amabhulokhi ambalwa emuva ukusuka kumgwaqo omkhulu ukuze umsindo wethrafikhi ulula. I-condo nayo ibheke ngemuva, inombono omuhle we-Mt Ararat buqamama.
Company Director from Perth, Western Australia.
Umphathi wesivakashi uyatholakala 24x7 ukuze axazulule yonke imibuzo.